Maxay yihiin calaamadaha kugu martiqaadaya inaad ka iibsato suuqa saamiyada? | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Maxay yihiin calaamadaha kugu martiqaadaya inaad ka iibsato suuqa saamiyada?
Mid ka mid ah daqiiqadaha ugu go'aansan ee maalgashiga ayaa shaki la'aan markii aad amarto amarradaada inaad iibsato saamiyada suuqyada sinnaanta. Waxay kuxirantahay qiimaha aad adigu rasmiga ka dhigato, hawlgalku wuxuu yeelan doonaa awood ka sii weyn ama ka yar dib u qiimeyn. Aad ayey muhiim u tahay in wax iibsigu lagu sameeyo heerarka ugu faa iidada badan danahaaga sida maalgashade yar iyo dhexdhexaad ah. Dabcan ma iloobi kartid in cidina kuguma qasbeyso inaad jagooyin furto. Laakiin kaliya xaaladaha ugu habboon iyo meesha aad ku leedahay damaanadaha ugu fiican ee dhammaystirka si guul leh.
Iibsashada suuqa saamiyada waa qaybta koowaad ee habka maalgashiga oo sidaas darteed waa inaad si taxaddar leh u daryeeshaa. Ma sameyn kartid iyaga oo aan lahayn nooc istiraatiijiyad ah, laakiin taa lidkeeda, waxaad ku sameyn kartaa iyada oo lagu falanqeynayo ujeedooyinkaagu. Waa inaad isweydiisaa waxaad rabto adoo xilal qaadaya, kaliya maahan kaydka, laakiin sidoo kale hanti kasta oo dhaqaale. Laga soo bilaabo biraha qaaliga ah illaa lacag kasta oo ku qoran suuqyada maaliyadeed ee ugu waaweyn.
Si ay kuugu fududaato inaad ogaato heerarka ay tahay inaad rasmi ka dhigato wax iibsiga sinnaanta, waxaan kuu soo bandhigi doonaa fikrado aad ku rumaysan karto dhaqdhaqaaqan. Xitaa maxay yihiin heerarka ugu wanaagsan ee lagu hagaajinayo waxqabadka galkaaga maalgashiga. Aad uma adkaan doonto inaad ku dhaqanto tilmaamahaan ficil ahaan. Waxaad u baahan doontaa oo keliya xiiso yar iyo anshax fara badan si aad u fuliso. Markaa wixii hadda ka dambeeya maalgashigaagu wuxuu bilaabmayaa in aad loo ilaaliyo.
1 Iibsashada suuqa saamiyada: isbeddellada kor u kaca
2 Jabinta iska caabinta
3 Iyadoo la sameeyay aasaaska laba-geesoodka
4 Abuuritaanka nusqaanta guntin
5 Oversold: dareen diidmo
Iibsashada suuqa saamiyada: isbeddellada kor u kaca
Haddii ay jirto xaalad macquul ah oo lagu iibsado saamiyada, taasi maahan wax kale oo aan ahayn marka isbeddelka guud ee suuqyada sinnaanta ay si cad u muuqdaan. Waxaad heli doontaa dammaanadaha ugu badan ee aad ku hagaajin karto hawlgalka. Fursad yar oo aad ku khaldami karto go'aanka. Ugu yaraan muddada gaaban iyo tan dhexe. Laga soo bilaabo qaabkan, wax ikhtiyaar ah uma lahaan doontid laakiin inaad boos ka furto xaaladaha ka jira suuqa saamiyada oo kor loo qaaday. Layaab maleh, waxaad heysataa wax kabadan luminta.
Xaaladahan awgeed, ma awoodi doontid inaad iska caabbiso inaad u dirto amar bangigaaga caadiga ah si aad u doonato dib ugu soo celinta keydkaagii. Astaanta aad u soo bandhigtay maalgashade ahaan waxba kuma jabna. Sababtoo ah saameyn ahaan, waxay ku habboon tahay labadaba ilaaliyeyaal muxaafid ah iyo kuwa mala awaal ah. Ma jiraan waxyaabo ka reeban oo u qalma inay sare u qaadaan wax ka iibsigaada suuqyada maaliyadeed. Dabcan, xaalad kasta oo ka hooseysa qiimaha iibsiga ugu fiican. Maaddaama ay ku siin doonaan farqi weyn si aad ugu ururiso dheefaha mid kasta oo ka mid ah hawlgallada aad fuliso.
Ujeedada ay tahay inaad gaarto ayaa ah in faraqa u dhexeeya qiimaha wax iibsiga iyo iibku uu u kala duwan yahay sida ugu macquulsan. Waxay noqon doontaa calaamadda ugu cad ee ay wax waliba si wanaagsan kuugu socdaan suuqyada sinnaanta. Wax kasta oo aan kani ahayn waxay dhabar jab ku noqon doonaan danahaaga. Layaab malahan, wax kasta oo aan guuleysan waa guuldarro aad lahaan doontid maalgaliye yar oo aad tahay. In kasta oo ay tahay wax aad u la yaab leh inaad ku guul darreysato xisaabintaada xaaladaha adag.
Jabinta iska caabinta
Waa xaalad kale oo ugu habboon ee lagu difaaci karo danahaaga. Ka faa'iideysiga jabinta iska caabbintu waxay noqon doontaa mid ka mid ah ujeeddooyinka ugu dhow ee lagu horumarinayo iibsashada falalka. Layaab ma leh, waa heerar ka mid ah qiimaha saamiyada laga kaxeeyo. Iyada oo amni weyn laga qabo natiijada hawlgallada suuqa saamiyada. Heerarkan qiimeynta qiimaha waxaa isticmaala iibsadayaasha si ay ugu soo rogaan xaaladdooda.
Khatarta kaliya ee hawlgalkani ka fikirayo ayaa ah inay noqon karto marin habaabin uun maalgashadayaasha. Sababtoo ah waxay hoos ugu dhaadhici karaan kal-fadhiyada suuqa saamiyada yar, in kasta oo aysan ahayn dhaqdhaqaaq aad u soo noqnoqda ee suuqyada maaliyadeed. Laakiin taa bedelkeeda, waa mid aad u kala goos goos ah qaabeynteeda. Sikastaba xaalku ha ahaadee, markay iska caabiyayaashu diidaan, ma lihid xulasho aan ka aheyn inaad ka faa'iideysato oo aad ku iibsato qiimo kasta. Waxay kaa caawin doontaa inaad hagaajiso xisaabtaada hubinta wixii hadda ka dambeeya.
Baxsashada dhinaca sare ee dhacdooyinkan ayaa runtii aad u rabshad badan. Iyada oo leh awood sare oo dib-u-qiimeyn ah, gaar ahaan shuruudaha ugu gaaban tan iyo markii la horumariyey. Intaas waxaa sii dheer, waa jaantus aad ku arki karto muuqaal cad. Uma baahnid aqoon gaar ah, ama xitaa waxaad isticmaali doontaa shaxanka sare ee saxda ah. Waa dhaqdhaqaaq laga dareemi karo astaan ​​kasta oo maalgashadayaal ah iyada oo aan laga reebin. Maadaama aad xaqiiqdii awood u yeelatay inaad xaqiijiso qaar ka mid ah hawlgallada la qabtay sannadihii la soo dhaafay.
Iyadoo la sameeyay aasaaska laba-geesoodka
Shaki la'aan, sagxadda hoose waxay noqon doontaa mid ka mid ah calaamadaha kuugu cad ee aad ku bilaabi karto iibsashadaada sinnaanta. Sababtoo ah saameyn ahaan, waxay leedahay xoogaa dulsaar ah. Xitaa kor ku xusan tirooyinka kale ee ku jira boorsada ku habboonaanta gaarka ah. Cillada weyn ayaa ah inaad u feejignaato sameynta shaxdan halka dhicitaanku joogsanayo. Laakiin haddii aad ogaato, shaki kuma jiro inaad yeelan doonto qayb ballaaran oo ka mid ah waajibaadka lagu qabtay hawlgalladaada suuq kasta oo maaliyadeed.
Si ka duwan tirooyinka kale, sagxadda hoose ee hoose waxay ku qaadataa muddo dheer isbeddelkeeda cusub. Waxay kugu qaadan kartaa sanado badan inaad dib ugu laabato si aad u xanaaqdo ama xitaa dhinaca dambe. Intaas waxaa sii dheer, waa dhaqdhaqaaq inta badan ku soo baxa xoogaa soo noqnoqod ah qiimaha saamiyada. Maaha wax aan micno lahayn, had iyo jeer waxay joogi doontaa sannad kasta iyada oo loo marayo shirkadaha ku qoran liisaska suuqyada saamiyada waaweyn. Sababtoo ah hoosta labalaabku waa joogsiga rasmiga ee hoos u dhaca qiimaha. Hanti kasta oo dhaqaale oo aad xilal kaqaban karto hadda wixii ka dambeeya.
Mid ka mid ah ujeedooyinka ay tahay inaad ka raadiso maalgashigaaga waa inaad ka hesho heerarkan gelitaanka suuqyada maaliyadeed. Sababtoo ah waxay ku siin doonaan dammaanad qaadyo ballaaran oo ah in isbeddelka faylalkaaga maalgashiga uu noqon doono mid aad u wanaagsan. Iyadoo leh qiimeyn aad u sareysa oo ka sarreysa taas oo ka dhalatay istiraatiijiyado kale oo maalgashi. Haddii go'aankaagu uu yahay inaad iibsato saamiyo, kama qoomameyn doontid istiraatiijiyaddii aad qaadatay.
Abuuritaanka nusqaanta guntin
Tirooyin kale oo calaamadeyn doona qabashada jagooyinka qiyamka ugu habboon ee dakhliga isbeddelka qaranka. Sababtoo ah saameyn ahaan, waxay sidoo kale leedahay saameyn aad u muhiim ah. In kasta oo dhibaatada weyn ee aad u baahan tahay caawimaadda garaafka awoodda badan leh ee muujinta qaabkan shaxdan muhiimka ah lagu muujiyay. Maahan in maalgashadayaasha oo dhami boos ay ku gaari karaan ujeedooyinkan la doonayo. Sababtoo ah waa shax aan si dhakhso ah iyo xaalad walba loo aqoonsanayn. Kaliya haddii aad khibrad ballaaran u leedahay suuqyada maaliyadeed waxaad ku sugnaan doontaa boos fiican oo lagu ogaado waqtiga. Sababtoo ah tani waa mid kale oo ka mid ah dhibaatooyinkooda, iyaga oo gaaraya farqiga u dhexeeya xilligii saxda ahaa ee ay horumarinayeen. Waxay fure kale u noqon doontaa hagaajinta howlaha.
Si ka duwan tirooyinka kale ee awoodda badan, farqiga ba'an ayaa ku xiran jadwalka waqtiga gaaban. Waxay aad ugu habboon yihiin hawlgallo badan oo mala-awaal ah. Sidoo kale intraday ama wixii isku mid ah, dhaqdhaqaaqyadu waxay ku soo baxeen isla ganacsiga. Tani waa mid ka mid ah farqiga u dhexeeya farqiga u dhexeeya tan iyo aasaaskoodii. In kasta oo caadiyan, iyo waqtiga la dhaafaba, waxay u egtahay inay buuxiso. Si markaa loo sii wado kor u kaca hore.
Oversold: dareen diidmo
Sidoo kale dhacdooyinkan ayaa aad ugu nugul inaad iibsato saamiyada shirkadaha liisaska ku qoran. Iyadoo amniga heerkiisu sarreeyo kiisaska badankood. Iyadoo aan loo eegin, waxaad yeelan kartaa safar aad u gaaban oo kor u socda. Ilaa heer ay kumeelgaar noqon karto oo waqtiga la ilaalin karo. Waa inaad ahaataa mid aad u dhakhso badan markaad rasmiyeeleyso howlahaaga markaad iibsaneysid wax hanti maal ah. Dhammaan maal-gashadayaashuna kuma jiraan kuwa ugu fiican xaaladaha si ay boos uga furaan sifooyinkan suuqyada maaliyadeed.
Waa boos ka mid ah heerarka qiimaha ee boosaska iibintu ay ku badan yihiin iibsadayaasha. Iyo sida looga falcelinayo isbeddelkan, sixitaanka sharciga sahayda iyo dalabka ayaa dib loo cusboonaysiiyay. Natiijo ahaan tan, waxaa jira falcelin ku saabsan jagooyinka wax iibsiga taasna waxay keenaysaa inaad awood u yeelato inaad iibsato saamiyada si aad isugu daydo inaad keydka uga dhigto mid faa'iido leh waqtiga ugu yar Ilaa ay danaha u dhexeeya jilayaasha hawshan isku miisaaman yihiin. Waqtigaas, waxay noqon doontaa waqtigii aad ka furi lahayd jagooyinka oo aad ururin lahayd faa'iidooyinka raasumaalka ee ka soo baxay iibsashadaada.
Sidaad ilaa hadda aragtay, waxaa jira heerar badan oo soo galitaan oo ay tahay inaad si rasmi ah uga dhigto wax iibsigaaga, laakiin ugu dammaanad qaad badan guusha. Maaha iyada oo aan si qoto dheer loo falanqayn dhammaan tirooyinka aan kuu soo bandhignay si ay caasimada uga dhigto mid faa iido leh. Ogaanshaha in ay tahay in lagu daro hawl iib wanaagsan. Waxay noqon doontaa xaaladda ugu wanaagsan ee ugu macquulsan wixii hadda ka dambeeya. Halka nasiibku noqon doono mid kale oo ka mid ah arrimaha go'aamiya natiijada maalgashigaaga. Si kastaba xaalku ha ahaadee, waxaad leedahay dhowr tirooyin `` si aad ujeeddooyinka ugu guuleysan karto si ka dhakhso badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Alaabada maaliyadeed » Bolsa » Maxay yihiin calaamadaha kugu martiqaadaya inaad ka iibsato suuqa saamiyada?
Beddel amaahda bangiga
Waa kuwee qaybaha ka faa'iideysan kara kor u kaca sicirka?